जाेर्नीकाे दुखाईबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन् घरेलु उपचार - खबर प्रवाह::Khabarprawaha.com जाेर्नीकाे दुखाईबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन् घरेलु उपचार - खबर प्रवाह
जाेर्नीकाे दुखाईबाट कसरी बच्ने ? यस्ता छन् घरेलु उपचार
खबर प्रवाह व्यवस्थापक
एजेन्सी । जाेर्नी दुखाइ धेरैकाे समस्या बनिरहेकाे छ । कतिले उपचार गर्छन् भने कतिले सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्छन् । व्यायामका समय हुने जाेर्नीकाे दुखाई अधिकांश मानिसहरूले बेवास्ता गर्ने गर्छन् । व्यायामकै कारण दुखाइ भएकाे हुनसक्ने अनुमानका भरमा मानिसहरू चिकित्सकिय परामर्श समेत आवश्यक ठान्दैनन् ।
जाेर्नी दुखाइ वृद्धवृद्धाहरूकाे मात्रै समस्या रहेकाे युवाहरूकाे बुझाइ छ । तर यी समस्याकाे बेवास्ता गर्नुहुँदैन । बारम्बार जाेर्नीकाे दुखाइ हुने समस्या देखिए उचित सावधानी अपनाउनुका साथै तुरून्तै उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
याे राेगका बिरामीहरूमा प्रायः ज्वरो आउने, मांसपेसीहरूमा पीडा हुने, प्राय: थकित महसुस हुने, भोक कम लाग्ने, ताैल कम हुँदै जाने लक्षणहरू देखिन्छन् ।
विशेषगरी बिहानीकाे समय शरीरका विभिन्न जोर्नीहरूमा यति धेरै पीडा हुन्छ कि, चलमलाउन समेत धेरै समस्या हुने गर्छ । जाेर्नीमा जहाँ-जहाँ दुख्छ, त्यहाँ सुन्निनु पनि याे राेगकाे विशेषता हाे । जाेर्नीकाे वरिपरि स-साना गाँठाहरू पनि देखा पर्छन्, जहाँ हातखुट्टा चल्मलाउँदा समेत आवाज आउने हुन्छ । शरीरकाे कुनै पनि भाग चलमलाउँदा दुख्ने, पाेल्ने, सुन्निने पनि हुन्छ ।
दुखाइबाट कसरी बच्ने ?
– ताताेपानीले नुहाउने ।
– अधिक वजनका कारण घुँडा र कम्मरमा दबाब पर्ने हुँदा आफ्नो तौल सधैँ नियन्त्रणमा राख्ने ।
– यदि तपाईं यसकाे औषधि लिइरहनु भएको छ भने, त्यसलाई समयमै लिनुहोस् । यसले पीडामा राहत दिन्छ ।
– व्यायाम र योगाले पनि धेरै फाइदा पुर्याउँछ । तर यसाे गर्नका लागि विज्ञहरूकाे सल्लाह आवश्यक छ ।
– प्रशस्त पानी पिउने ।
– धम्रपान, मद्यपान त्याग्ने ।
– पोषणयुक्त आहार लिने ।
– राेगबाट छिट्टै छुट्कारा पाउन डाक्टरसँग परामर्श लिने ।
घरेलु उपचार :
– दुखाइबाट छुट्कारा पाउन जैतुनकाे तेलले मालिस गर्ने, यसले राहत दिलाउँछ ।
– स्टिम बाथ र मालिस यसका लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ ।
– दैनिक अदुवाकाे पाउडरले पनि दुखाइमा राहत दिन्छ ।
– याे समस्या निदानका लागि पेट सफा राख्नु पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण फाइबरयुक्त खाना खानुहाेस्, जसले बिहान पेट राम्राेसँग सफा गर्छ ।
विप्लवको पार्टी फुट्यो
केन्द्रकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहसम्म गडबढी भयो: प्रधानमन्त्री ओली
‘अध्यक्ष होइन, अधिकार चाहिन्छ’
माओवादीको बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङ: माधव समूह एमालेमा जाने देखियो
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्नु सकारात्मक कदमः गगन थापा
उमेश श्रेष्ठले गरेका निर्णय रोक्न देउवाको निर्देशन
नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले दार्चुलामा भएको घटनामा सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।बुधबार पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएकाले यस घटनामा सबै दल एकै ठाउँमा हुनुपर्ने र संसद्को तागत सरकारलाई सुम्पनुपर्ने बताउनुभएको हो । नेता थापाले भन्नुभयो, “नेपालको चुच्चे नक्शा सार्वजनिक गर्दा संसद्को तागत र सबैको सहयोगले नै […]
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई राजीनामाको अनुरोध वा निर्देशन कहिँकतैबाट नआएका दावी गरेका छन् । बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले वैकल्पिक बाटा दिइए प्राधिकरण छाड्न तयार भएको तर अक्षम भनेर निकाल्न खोजिए शैह्य नहुने बताए । ‘वैकल्पिक बाटो दिँदा जान्छु, जिम्मेवारी लिन्छु’, उनले भने, ‘अक्षम भनेर निकाल्न पाइँदैन, अन्याय गरे अदालत […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले गरेको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेर श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले उनले गरेको निर्णयमा समेत हस्तक्षेप गरेका छन् । श्रेष्ठले हिजोमात्रै कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमसहित चार जनाको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका थिए । उक्त निर्णय […]
राशिफल : असार १५ गते मंगलबारको निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल असार १५ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ जुन २९ तारीख असार कृष्णपक्ष पञ्चमी तिथी शतभिषा नक्षत्र नक्षत्र प्रीति योग कौलव करण चन्द्रमां कुम्भ राशिमा आनन्दादि योगमा मृत्यु योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु धान दिवस, दही चिउराखाने दिन मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, […]
करोडौँ खोप ल्याउने ओलीको भाषण मात्रै: ज्ञवालीले ‘ब्रेक थ्रु’ भन्दै ढाँटे
काठमाडौं । सरकारले एक दुई महिनाको अवधिमा एक करोडभन्दा बढी डोज खोप लिने घोषणा गरे पनि न कुनै देशबाट खोप आउन सकेको छ न त सम्बन्धित देशले खोप दिने समय तोकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बुधबार कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकमा थप ४० लाख खोप ल्याउने एक साताभित्र तयारी भइरहेको बताए। दुई […]
भरतपुर महानगरमा जिल्लाकै पहिलो अत्याधुनिक आपतकालिन सेल्टर सञ्चालनमा
चितवन । भरतपुर महानगरले जिल्लामा नै पहिलो पटक अत्याधुनिक आपतकालिन आवास (ईमरजेन्सी सेल्टर ) सञ्चालनमा ल्याएको छ । बाढी तथा अन्य विभिन्न विपद् व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने उद्देश्यले चितवन जिल्ला कै पहिलो ईमरजेन्सी सेल्टर पश्चिम चितवनको भरतपुर २८ साझापुरमा सञ्चालन गरिएको हो । शिलन्यास भएको १८ महिनामा नै निर्माण सम्पन्न गरिएको जमिनबाट २ मिटर उचाईमा […]
यान्छीलाई फिर्ता बोलाएर खास पात्रलाई नेपाल पठाउने राष्ट्रपति सी को तयारी